Makiyi ekusarudza duvet kavha | Bezzia
Maria vazquez | 14/09/2021 12:00 | Musha
Nordic wako wekare ave kutopa kurova kwake kwekupedzisira uye hazvichakodzeri kumutumira kunowacha zvekare? Iwe une imba nyowani uye unoda kutsiva yako yekuwaridza nekuzadza kweNordic? Kana usati wambosangana ne kutenga duvet, iwe uchazoda mamwe makiyi kuti uzive nzira yekusarudza yakakodzera kwazvo.
Pane zvakawanda zvakasiyana mikana kana zvasvika pakutenga Nordic. Ungaziva sei ipapo, ndeipi sarudzo yakanakisa? KuBezzia nhasi tinoedza kukutungamira mune ino nzira yekutenga, uchitsanangura zvaunofanira kutarisa, chii zvaunofanira kuchengeta mupfungwa kutenga kutenga kwakanaka.
1 Natural kana synthetic kuzadza?
1.1 Zvisikwa zvakasikwa
Natural kana synthetic kuzadza?
Iyo yekuzadza zvinhu ndiyo inosarudza chinhu che uwane simba rakaringana rekudzivirira. Iko kune zvakasikwa mafirita uye ekugadzira mafirita eakajairwa tambo, ye polyester mhango tambo kana ye microfibers. Kuziva zvayakanakira nezvayakaipira zveimwe yeizvi zvinhu zvinokubatsira iwe kuita yako yekutanga sarudzo.
Kana tichitaura nezvekuzadzwa kwechisikigo tinotaura nezveminhenga kana pasi. Feather kuzadza Vanosanganisira nzimbe dzinovaita vareme, dzisinganakidze nekubata uye dzinovapa yakasarudzika yekushisa yekuisa simba kana ichienzaniswa neyepasi.
Pasi kuzadza iwo akareruka uye ane akanakisa ekudziya mweya. Iyo yakakura iyo pasi inoshandiswa mukuzadza, huwandu hukuru hwemakamuri emhepo anogadzirwa, izvo zvinobvumidza kutenderera kuri nani uye nekudaro kugoverwa kuri nani kwekupisa uye nekukurumidza kubuda kwemvura kwehunyoro.
Kuziva mhando yepasi yakashandiswa isu tinofanirwa kutungamirwa ne chiyero chakajairika chinozivikanwa seZadza Simba. Izvi zvinoratidza iro vhoriyamu rinotora 28,35 g. pasi pasi pemamiriro ezvinhu akajairwa. Iyo nzira, nekudaro, kuyera mhando yayo. Iwo akanakisa ekuzadza kweNordic pamusika anowanzo kuve akatenderedza Fill Power ye9 kana 10, pachiyero chegumi.
Iwo anovhenekera mabhenefiti echisikigo pasi kuzadza ari pachena, saka iyo sarudzo inodhura pamusika. Imwe asi inogona zvakare kutiodza moyo kubva pakubheja parudzi urwu rwekuzadza: iyo chokwadi chekuti isu tichafanirwa enda kunoshenesa kuti uzvichenese.
Izvo zvinogona kugadzirwa neyakajairwa tambo, isina mhoni polyester tambo kana microfibers. Zvese zvine mweya, kudzivirira kuwanda kwefungus uye kune hypoallergenic. Microfiber kuzadza ndiyo iyo inonyanya kutevedzera zvakasikwa pasi, zvese muhukuru uye inodzivirira simba. Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva kuti kune yakafanana kupisa mashandiro uye kudziya kwekupisa, yekugadzira yekuzadza ichagara inorema kupfuura yakadzika.
Pakati pezvakanaka zvikuru zve synthetic fillers ndeye mutengo wayo, wakachipa kupfuura izvo zvemadhiri pasi. Imwe yezvakanaka zvacho ndeye nyore kushamba; nokudaro ichiva sarudzo inonyanya kufarirwa mumakamuri evana uye / kana dzimba dzechipiri.
Kuumbwa kwemakamuri emhepo mukati meduvet chinhu chakakosha pakuvandudza kwaro kuputira kugona. Kuti kuzadza kunogoverwa zvakaenzana pese pane duvet kiyi mune yemhando chigadzirwa. Iyo yakasimba-inokodzera dhayamondi-patani yekuvaka inonyatso kusangana nechinangwa ichi. Iyo duvet yakagadzirwa ne100% donje, iyo inobvumidza iyo yekuzadza kufema, ine yakasimba dhizaini-yakavakwa kuvaka, saka ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
"Kurema mumagiramu epepa pa square mita" Aya ndiwo marondedzero anoita RAE, izwi rinoshanda sechiyero che kupisa kupisa kwe duvet. Iyo yakakwirira girama, iyo inowedzera kupisa. Kuti usarudze yakakodzera kwazvo, zvichave zvakafanira kufunga nezvese tembiricha iri mukamuri medu uye tembiricha yemuviri wedu.
Pese patinotaura nezve imba inopisa iyo tembiricha isingadzikire pasi pe180ºC, a grammage yakatenderedza 200g / m2 zvinogona kukwana kubhadhara zvatinoda. Munzvimbo dzinotonhora zvakanyanya kwisingapfuure 15ºC, zvakadaro, duvet ine huremu hunosvika 400g / m2 inogona kudikanwa.
Iwe ikozvino wave kujekeserwa nezve mareferenzi aunofanira kutarisa kuti uwane duvet yakakodzera kwazvo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Makiyi ekusarudza duvet
Cookies ine chokoreti yakasviba, inonaka!